इन्द्रसराेवर गाउँपालिकाकाे सिस्नेरीमा क्रियाशील श्रमजीवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाे २२औँ बार्षिक साधारण सभा तथा ११औँ अधिवेशन ११ मंसिरमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता र सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उमाकुमारी लामाकाे अध्यक्षतामा साधारण सभा सम्पन्न भएकाे हाे । कार्यक्रममा असल बचत कर्ता, असल ऋणी र वृद्ध सेयर सदस्यलाई सम्मान गरिएकाे थियाे ।
अधिवेशनले ११ सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेकाे छ ।
२०५४ सालदेखि निरन्तर सहकारी अभियानमा क्रियाशील साे सहकारी संस्था अहिले आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेकाे छ । रु. २५०० बाट शुरु गरिएकाे सहकारीकाे अहिले रु. ४ कराेड ६९ लाख ८५ हजार ५ सय २२ रुपैँयाकाे काराेबार रहेकाे छ ।
सहकारीमा ८०३ शेयर सदस्य रहेका छन् ।
-थाहा टाइम्सका लागि सन्ताेष बानिया/सिस्नेरी
भैंसे–भीमफेदी सडक स्तरोन्नति सुस्त, समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित